Nhungamiro Kubva Semalt Kusingaverengi Vakashambadzi Venguva Inobva KwaGoogle Analytics Shandisa Asynchronous Code
Kuita mararamiro akakodzera kune webhusaiti yako uye kuvandudza vanogona kuona vashanyi pane nzvimbo yako yebhizimisi haigoni kuiswa zvakanaka. Kurova misika yako yekutengesa kwete kungoita kuwedzera kutengesa kwepamusoro asiwo kuwana data yakachena uye zvinyorwa pamagumo ekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga Engine Engine. Kwemwedzi mishomanana yapfuura, mabhizinesi eB2C ave achikurudzira kushushikana panyaya ine chokuita nekukwira kwemugwagwa wepakati pamabhuku avo - buy real fake id.
Jack Miller, Mutungamiri Mukuru weVatengi Mutevedzeri we Semalt , anoudza munyaya yacho kuti ungaita sei izvi kubudirira.
Tinotenda kuGoogle kuiswa kwehupurogiramu dzakakosha dzave dzichibatsira vatengi kuti vasabvise magodhi emukati uye spammers muzvikwata zvavo zveGoogle Analytics. Chido chekutsvaga pasi nevatengi vanoshanyira webhusaiti yako haigoni kuomeswa zvakanaka zvakakwana kana zvasvika pakushambadzira kwehuwandu. Vatengesi vekutengesa vanonyanya kukoshesa pakuchengeta kunze kwemugwagwa kana vachienzaniswa nepamugwagwa. Rambai makwikwidzi enyu ekutanga musingabvumiri kero yePI kubva kuG GA zvinyorwa.
Ungadzivisa sei mutemo wepakati kubva kuGoogle Analytics statistics
Chitima chinobudiswa nevashandi vako kana kuti mutengesi wako wekutengesa kunogona kuchinja maGoogle Analytics. Inzira yemugwagwa inoshanda kuti igadzire data yekambani yako nekukupa iwe rudzi rwemotokari yausingadi kuona. Nzira dzakasiyana-siyana dzave dzichiendeswa mberi neGoogle kubatsira vateereri kubvisa bots, referrer spam, uye mukati mechirangaridzo kubva pahupenyu hwavo.
Zvisinei, magadzirirwo anoenderana nenhamba yevashandi kupinda mune imwe webhusaiti kuti vapedze mabasa akasiyana-siyana. Somuenzaniso, kana uine vashandi vanodarika makumi mapfumbamwe ekutenga matanda pa webhusaiti yako, zvino vanozobva vanyora shure shure kwekupedzisa mabasa avo, kukosha kunowira pawebsite yako kunorema. Kushandura shure kunoderedza yako webhusaiti yepamusoro neGoogle Algorithms, ichicherechedza shanduko yako yekutendeuka seinrelevant.
Mazano ekutsvaga kushambadzira kwepamberi mukati uchishandisa cookie
Kuedza kusabvisa mabhodhi uye motokari dzomukati dzinokonzerwa nevashandi vako pose paunoshanyira nzvimbo yako yekudyira yekudya kwemasikati kunogona kupedza nguva. Iwe unogonawo kusarudza kugadzira firiji itsva uchishandisa zvirongwa zvemugadziri wefaira kuti udzivise traffic dzomukati kubva kune skewing nemigumo yako. Pano pane matanho ari nyore achakubatsira kuti usabvisa runhare rwekero ye IP kuburikidza nekusika maonero akasvibiswa.
a) Pinda kune yako GA uye sarudza webhusaiti yako dashboard huru.
b) Dhaisa zita rebhundaneti pasi pe dashboard.
c) Dhinda yako GA filter manager uye tanga imwe itsva musinganzwisisi firimu.
d) Shandisa 'Zvigadzirwa Zvemagetsi' sechirongwa chekuisa.
e) Shandisa 'No_report' semafuta yako.
f) Wedzerai mawebhusayithi ako nezita ku 'Selected Website Profiles' uye tapota 'Bhokisi Rinochinja'.
Mushure mekusimbisa iyo itsva yefaira, funga kuisa cookie itsva pawebsite yako kuti uite zvishanduko zvitsva. Iyi mamiriro ezvinhu inofanirawo kushandiswa kumushandi wako wekutengesa uye vashandi vako vanoshanyira webhusaiti yako kuti apedze mabasa. Kune vatengi vanosarudza kushandura zvipfeko zvakasiyana pavanenge vapinda mawebhizinesi webhusaiti yavo, kuisa cookie kumusana wega wega kunokurudzirwa. Iko yeyynchronous code inobatsira vatengesi vekutengesa kuti vaone kutarirwa kunoitwa nevatengi vavo. Shandisa purogiramu yakafanana yekuvhara motokari yechipfuva, referrer spam, uye bots kubva pakunyora mhinduro dzako.